ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: တိုလီ ထွာလီ (ဘာသာရေး)
တော်သေးတာပေါ့ ကြောင်ဖြူများရှင်တို့ဝါးတီးဖွင့်နေတာ ဓါတ်ပုံနဲ့သက်သေ ထူမယ့်သူ မရှိတာ ကံကောင်းသွားတယ်။ ဟီးဟီး
"ကုသလံ အန၀ဇ္ဇသုခ၀ိပါကလက္ခဏံ။ ကုသိုလ်ဟူသည် အပြစ်မရှိ၊ ချမ်းသာခြင်းလက္ခဏာရှိ၏"ဟု အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာ ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးသည်။
ခရစ္စတလ်ရဲ့ ကုသိုလ်အစုစုအတွက် သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိပါသည်။ ကြောင်ပုံလေးက ချစ်စရာလေးနော်။ သူ့နာမည်က...?
နှစ်ကူးဖို့က လိုပါသေးတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ဘာလို့ နောက်ဆုံးပိုစ် ဖြစ်ရတာတုန်း။ ရှင်းပါ...
ကြောင်ဖြူများရှင်(ဖယောင်းစက်)တို့ဝါးတီးဖွင့်နေတာ ဓါတ်ပုံနဲ့သက်သေထူရမှာ
ပုံတွေအတွက် သာဓု...သာဓု -သာဓု.
ကိုရင်ကလေးများ ဆွမ်းခံကြွလာတာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တာ....
လည်လည်လာပြီး သာဓုခေါ်သွားကြသူအပေါင်း ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ ပြည့်ဝကြပါစေ :)
သာဓု သာဓု သာဓုပါ ခရစ္စတလ်ရေ။
ဒီနှစ်အတွက် ဒီပို့စ်လေးဟာ နောက်ဆုံးပို့စ်အဖြစ်
Merry Christmas & Happy New Year Chrystal !!!
အစ်မခရစ် ရေးထားတာလေး ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။
ခုမှလာမန့် ရတာ ။ ဗိုင်းရပ်ဝင်နေတာ့ မြန်မာစာရိုက်မရတာနဲ့ ..
ကြည်နူးသွားတယ်ဆိုလို့ အစ်မက ထပ်ဆင့် သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။
ကြောင်ပုံလေး ကြိုက်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။
ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးနဲ့ နောက်ဆုံး လုပ်မလို့ပဲ ရိုစ့်ရေးခိုင်းတဲ့ ပိုစ့်တင်ရမှာဆိုတော့ နောက်ဆုံးမဖြစ်တော့ဘူး။
သမုဒယပေါ့ အတွယ်အတာပေါ့ အမျှင်ပေါ့ :)